Codsiyada Android: dib u eegista, sii deynta cusub, bilaash iyo ka badan! | Androidsis
Casriga ah Android waxba ma noqonayso la'aanteed codsiyadooda. Codsiyada ayaa ah kuwa kuu oggolaanaya inaad kordhiso shaqeynta taleefannada casriga ah ee loo yaqaan 'Android smartphone' si aan xad lahayn oo aad u sameyso xaruntan wax alla wixii aad rabto: qalab shaqo, xarun ciyaarta, ajende shaqsiyadeed ama wax kasta.
On Google Play - dukaanka barnaamijka Android - waxaan haynaa barnaamijyada dhammaan dhadhanka iyo dhammaan howlaha suurtagalka ah. Ajandayaasha, ciyaaraha, otomaatiga xafiiska, shabakadaha bulshada, codsiyada wakhtiga firaaqada, ee ciyaaraha, iwm. Waxaa jira ikhtiyaarro badan oo waxa ugu muhiimsan ay tahay inaad awood u yeelatid inaad diirada saarto oo aad hesho waxa aad u baahan tahay, iyo sidoo kale inaad iska ilaaliso rakibida codsiyada gebi ahaanba aan loo baahnayn unnecessary Waana taas waxa aan u nahay! Si aan kaaga caawiyo adduunkan barnaamijyada Android.
Uruurinta barnaamijyada loogu talagalay Android
Barnaamijyada ugu fiican 2018
Soo dejiso APK-yadii ugu dambeeyay ee barnaamijyada ugu fiican
Ma raadineysaa barnaamijyo caafimaad? Kala soo bax qaybtan barnaamijyada ugu fiican ee lagu hagaajinayo caafimaadkaaga ama tilmaamo ku saabsan sida aad qaab ahaan ugu joogi karto.
Barnaamijyada jimicsiga ugu fiican
Codsiyada in la sameeyo maqnaanshaha
Barnaamijyada lagu sameeyo yoga
Barnaamijyada sigaar joojinta
Cunnooyinka iyo barnaamijyada karinta
Barnaamijyada ugu fiican socodka
Barnaamijyada ugu fiican jimicsiga
Qaybtaan waxaad ku ogaan doontaa wax walba oo ku saabsan shabakadaha bulshada ee ugu caansan adduunka. Sida loo soo dejisto iyaga, khiyaanooyinka sida ugu wanaagsan loogu isticmaalo Android iyo dhammaan wararka iyaga ku saabsan.
Barnaamijyada si looga faa'iideysto Twitter
Barnaamijyo dadka lagula kulmo
Barnaamijyada ugufiican ee wicitaanada fiidiyaha ah la sameeyo
Wararkii ugu dambeeyay ee WhatsApp iyo tabaha
Adeegyada yutiilitida waxaad ka heli doontaa barnaamijyada ugu fiican ee Android kaa caawin doona inaad noloshaada fududeyso. Iskaan dukumiintiyada, qor ama ku hagaaji wax soo saarkaaga dalabyada ugu fiican ee aad ka heli doonto qaybtaan.
Barnaamijyada ganacsiga ugufiican
Barnaamijyada Xusuusinta Ugu Fiican
Codsiyada lagu hagaajinayo wax soo saarka
Barnaamijyada xusuus-qorista ugu fiican
Codsiyada lagu xakameynayo kharashyada
Barnaamijyada ugu wanaagsan ee lagu soo kabsado faylasha la tirtiray
Codsiyada lagu ilaalinayo arimahaaga gaarka ah
Barnaamijyada si loo joojiyo wicitaanada
Codsiyada lagu duubo shaashaddaada moobaylka
Barnaamijyada lagu baarayo dukumiintiyada
Barnaamijyada ugufiican ee lagu kala furfuro faylasha
Barnaamijyo lagu ogaanayo shucaacyada
Haddii aad xiiseyneyso codsiyada Podcast ama aad awood u leedahay inaad noqotid DJ adoo adeegsanaya taleefankaaga casriga ah ee 'Android', waxaad awoodi doontaa inaad dhammaantood ka wada ogaato oo aad sidaas ugu adeegsato taleefankaaga sida ugu fiican.
Barnaamijyada ugu fiican ee muusikiisteyaasha
Codsiyada lagu dhageysto raadiyaha
Codsiyada ah inaad DJ ka noqoto Android
Barnaamijyo lagu dhagaysto barnaamijyada barnaamijyada ee 'Android'
Inbadan oo ku saabsan barnaamijyada heesaha ee Android
Haddii waxa aad raadineyso ay yihiin codsiyo wax looga beddelayo sawirradaada moobilkaaga Android, halkan waxaa ku yaal qaar ka mid ah barnaamijyada ugu wanaagsan ee dib loogu hagaajiyo sawirradaada:
Barnaamijyo lagu abaabulo sawirro
Codsiyada qaadashada sawirrada muuqaalka kore
Barnaamijyo lagu sameeyo memes
Barnaamijyada naqshadeynta garaafka ugu fiican
Inbadan oo ku saabsan barnaamijyada sawir qaadista ee loogu talagalay Android
Haddii aad raadineyso codsiyo aad wax kaga baran karto taleefankaaga Android, markaa waxaan kaaga tagi doonaa xulashada barnaamijyada tababarka ugu fiican Google Play.
Barnaamijyada ugufiican ee lagu barto Faransiiska
Barnaamijyo lagu barto heesaha
Barnaamijyo lagu barto Jarmalka
Barnaamijyo lagu barto sida loogu ciyaaro biyaano
Wax badan oo ku saabsan codsiyada si wax looga beddelo PDF
Nidaamka deegaanka Google
Haddii aad rabto inaad cusbooneysiiso wax kasta oo la xiriira nidaamka deegaanka ee Google, oo ay ku jiraan barnaamijyadeeda, markaa ha seegin qaybtan. Dhamaan wararka iyo tabaha ku saabsan waxaa laga heli karaa dhexdeeda.
Barnaamijyada ugu fiican ee smartwatch-kaaga Android
Barnaamijyada loogu talagalay TV-ga Android
10 waa inuu lahaadaa barnaamijyada Android
On Android waxaan ka helnaa xulasho ballaaran oo codsiyo ah oo la heli karo. In kasta oo ay jiraan codsiyo qaarkood oo ka sarreeya inta kale, kuwaas oo aan u tixgelin karno kuwa ugu fiican. Kuwani waa 10ka barnaamij ee ugufiican ee loo heli karo Android maanta.
Codsiga hagidda ayaa si weyn isu beddelay. Mar dambe uma isticmaalno kaliya jihooyinka ama socodka marka aan meel gaari wadno. Waxaan sidoo kale arki karnaa xaaladda taraafikada, helitaanka meelaha xiisaha leh ama helitaanka dalabyada maxalliga ah. App aad u dhameystiran
Barnaamijka Iswidishka ee qulqulka muusikada waa midka ugu caansan Android. Waxay na siineysaa marinka buug-gacmeedka weyn ee muusikada ee taleefanka, kaas oo noo oggolaan doona inaan dhagaysanno muusigga aan jecel nahay meel kasta oo aan joogno.
Codsiga waa muran la'aan mid ka mid ah kuwa ugu caansan Android. Thanks iyada waxaan farriimo u diri karnaa asxaabteena iyo qoyskeena waana la xiriiri karnaa wakhti kasta. Waxaan sidoo kale leenahay wada hadal kooxeed, marka lagu daro suurtagalnimada wicitaanada ama wicitaanka fiidiyowga.
Barnaamijkan sawirku waa mid ka mid ah waxyaabaha muhiimka u ah Android maanta. Kaliya maahan inay noo ogolaato inaan sawiradeenna oo dhan si badbaado leh ugu dhex kaydinno daruuraha, laakiin sidoo kale waxay noo oggolaaneysaa inaan si fudud ugu abaabulno dhammaan noocyada kala duwan. Waxay sidoo kale iyaga u dhigantaa qalab kale.
Shabakada bulshada ayaa hada kamid ah barnaamijyada ugu caansan Android. Waxaan ku soo dhejin karnaa sawirro iyo fiidiyowyo, marka lagu daro sheekooyinkooda (oo baaba'aya 24 saacadood). Suurtagalnimada in lala socdo xisaabaadka dhammaan noocyada barnaamijka, marka lagu daro inaad awood u leedahay inaad wax ku iibsato gudaheeda, waxay ka dhigaysaa mid ka mid ah kuwa ugu dhammaystiran.
Shabakad kale oo bulsheed oo caan ku ahayd inay suuqa ku ilaaliso waana barnaamij muhiim u ah Android. Waad ku mahadsan tahay waxaan la xiriiri karnaa asxaabta, marka lagu daro inaan kala soconno wararka adduunka ama aan raacno fanaaniinta aan ugu jecel nahay gudaha.
Codsiga waa mid aasaasi ah oo taleefan kasta oo Android ah. Waxaan u heli karnaa cinwaanka emaylkeena qaab fudud. Intaa waxaa dheer, waxaan haynaa hawlo aad u xiiso badan, sida jadwalka emaylka. Sidaa darteed, in markasta la helo meel kasta oo aan joogno.
Hab wanaagsan oo loogu beddelo muuqaalka taleefankaaga Android qaab fudud, oo leh shaqooyin iyo ikhtiyaarro cusub, sida hab mugdi ah, oo u oggolaanaya dadka isticmaala in ay si shakhsi ahaaneed u adeegsadaan nidaamka qalliinka mar walba.
Browser wuxuu muhiim u yahay Android, laakiin Google Chrome waa suurtagal, oo asal ahaan loogu rakibay taleefannada, kan ugu dhameystiran. Waxay na siinaysaa hawlo badan, isticmaalkeedu waa sahlan yahay sidoo kale waxay noo ogolaaneysaa inaan ku waafajino nooca desktopka koontada Google.
Codsi kale oo fariin ah, oo boos ka kasbaday Android. Waxay u taagan tahay qaabkeeda fudud, laakiin waxay na siineysaa hawlo badan oo kala duwan, gaar ahaan berrinka asturnaanta, wadahadal qarsoodi ah ama suurtagal ah in si toos ah loo baabi'iyo wax yar ka dib.
Barnaamijyo badan oo Android ah
Qaybtaan waxaad ka heli kartaa noocyo badan oo codsiyo ah oo aan falanqeyno maalin kasta. Baro dib u eegistayada ugufiican iyo sidoo kale dhamaan casharro iyo tabaha si aad uga faa'iidaysato barnaamijyada Android.
by Haaruun Rivas samee horas 3 .
Mid ka mid ah shabakadaha bulshada ee ugu caansan uguna isticmaalka badan adduunka, oo ay adeegsadaan in ka badan 1,200 milyan oo isticmaale, ayaa ah ...
by Ignacio Sala samee horas 21 .
by Ignacio Sala samee 6 maalmood .
Ma waxaad tahay qof jecel ugaarsiga ugaarsadaha oo dhib ku ah aqoonsiga waxyaabaha la cuni karo? Waxaa jira codsiyo aqoonsi oo badan ...
Maaddaama tikniyoolajiyadda taleefannada casriga ahi ay sii kordhayso, dukaammada dalabka ee aaladaha mobilada, waxaan leenahay ...
Haddii aad si joogto ah wax uga akhrisatid tikniyoolajiyadda, waxay u badan tahay inaad maqashay erayga 'deepfake', oo ah eray loo isticmaalo ...
by Haaruun Rivas samee 1 toddobaad .
Wadahadalka fiidiyowga ama wicitaanka fiidiyowga waa mid ka mid ah qaababka isgaarsiinta ugu badan ee maanta jira. Wax badan bay inaga badbaadisaa ...
Fintonic wuxuu ahaa aalad muhiim ah sanado markii lagu maamulayay dhaqaalaha shaqsi ahaaneed guriga ...
Beddelka ugu fiican ee Amazon
Amazon waxay la wareegtay qayb weyn oo suuqa ka mid ah markay timaado ka adeegashada internetka. Isbarashada ...
by Haaruun Rivas samee Toddobaadyada 2 .